We.com.mm - (၁)နာရီ စာထိုင်ဖတ်တာနဲ့ ငွေကျပ်(၁၀၀၀)ရမယ့် တိုးတက်ရေးအစီအစဉ် ရန်ကုန်မှာစတင်
စာဖတ်ဝါသနာပါသူများနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် (၁)နာရီ စာဖတ်ရင် ကျပ်ငွေတစ်ထောင်ရမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို Royal Job Agency ကုမ္ပဏီမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ညနေ(၆)နာရီမှ ည(၇)နာရီအထိ စာလာဖတ်သူတိုင်းကို လမ်းစရိတ် ငွေတစ်ထောင်ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စာဖတ်သူများအစဉ်ပြေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကော်ဖီနဲ့ မုန့်ကိုလည်း အခမဲ့ ကျွေးမွေးမှာဖြစ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေရန်လည်း စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းတဲ့သူတွေ များပြားနေပြီး တစ်ရက်ကို (၂၀)ဦးသာ လက်ခံထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
လူတိုင်း စာဖတ်လာစေရန်၊ စာဖတ်ခြင်းကနေ မှန်ကန်တဲ့ဘ၀ အတွေးအခေါ်တွေရရှိပြီး မိမိဘဝကို တိုးတက်ဖို့ အခုလို စာဖတ်တဲ့အစီအစဉ်ကို စတင်တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Royal Job Agency မှ စီစဉ်ပေးထားသော စာအုပ်များမှ (၁၀)အုပ်ပြည့်အောင်သာဖတ်ပါ။ သင့်အတွေးခေါ်အယူအဆများ ပိုမိုတိုးတက် အားကောင်းလာကာ သင့်ဘဝတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ အဓိက လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းချက်ကတော့ စာဖတ်ချိန်အတွင်း လုံးဝ(လုံးဝ) ဖုန်းအသုံးပြုခွင့်မရှိပါဘူး။
ဖတ်ရှု့ရမယ့် စာအုပ်များမှာ …
1. 10 Day MBA ဖြင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်း - နေဇင်လတ်
2. ထူးချွန်ကျွမ်းကျင် မီလျံနာစီးပွားရေးဦးဆောင်ရှင် - ဇင်ဖြိုးပိုင်(MESI)
3. ထိတ်ထိတ်ကြဲမန်နေဂျာ ဖြစ်လိုသော် - ဝင်းသိန်းဦး
4. မင်္ဂလာရှိသော မန်နေဂျာ - ဝင်းသိန်းဦး
5. ကျွန်တော်ဆွဲလှုပ်မိသော ကုမ္ပဏီ၏ အမှားများ - ရဲမြင့် (စွန့်ဦးတီထွင်)
6. ကုမ္ပဏီကို ကျောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ မန်နေဂျာကိုကျောခိုင်းတာ - ရဲမြင့်(စွန့်ဦးတီထွင်)
7. ဘာကြောင့် ခုထိမချမ်းသာသေးတာလဲ - ဖေမြင့်
8. ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ ကြီးပွားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ် - ဖေမြင့်
9. အပြောင်မြောက်ဆုံး ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း - ဖေမြင့်
10. စံပြအရောင်းသမား - မောင်ပေါ်ထွန်း
11. ဇူကာဘတ်နှင့် Facebook ဂယက် - ဗန်းမော်သိန်းဖေ
12. ဂျက်မားနှင့် အလီဘာဘာ - ဗန်းမော်သိန်းဖေ
13. အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သို့ ခြေလှမ်း(၅၀) - ဗန်းမော်သိန်းဖေ
14. မိတ္တဗလဋီကာ - ဦးနု
15. လာခြင်းကောင်းသော လူကလေး - ခင်နှင်းယု
16. ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
17. ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော်စကားပြေ - မဟာပညာဗလပဌမကျော် ဦးကြီးဖေ
18. တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ - ရွှေဥဒေါင်း
19. တွေ့ရကြုံရ ကျွန်တော့ဘ၀ - ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေ စတဲ့ တကယ့်နာမည်ကြီး စာရေးဆရာကြီးများ ရေးသားထားတဲ့ တိုးတက်ရေး စာပေများကို ဖတ်ရှု့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အပတ်စဉ် လာဖတ်မယ့်သူတွေအတွက် စာအုပ်တွေ မထပ်အောင်လည်း စီစဉ်ထားပြီး ဘဝတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ့် စာအုပ်တွေကို စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ များပြားလာရင် စာရေးသူနဲ့ စာဖတ်သူအကြား ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲတွေ၊ စာပေစကားဝိုင်းတွေလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ Royal Job Agency ၊ အမှတ်(၁၈)၊ (၆)လွှာ (B)၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၄၀၀ ၄၀၀ ၇၆၉ ကို ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Source; Royal Job Agency Page
မကြိုက်ရင် Vote မပေးနဲ့ဆိုလို့ ပရိသတ်တွေအထင်လွဲတာခံနေရတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင် ချမ်းမြေ့မောင်ချို
ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးများအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ ပုဆိုးနဲ့ထဘီတွေတစ်လကို အထည် ၂၀ လောက်ပျောက်နေ
အန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ အထပ်မြင့်တိုက်ပေါ်မှ လူတွေကို ကယ်တင်မယ့် ဒရုန်းများ တရုတ်တီထွင်
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ Melbourne မြို့မှာ ဂေါက်သီးလုံးအရွယ် မိုးသီးတွေကျရောက်ခဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒပြသူများနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပဋိပက္ခဖြစ်
မိန်းမကို ဒေါသထွက်ပြီး နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းတွေကို တဝက်စီခွဲပစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား
ချမ်းချမ်းရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ကွာရှင်းဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ဘုဏ်းသိုက်
Selenators တွေစိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Fan တစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ Selena ရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ချို့
Area 51 စီးနင်းမှုကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက မြင်အောင် Livestream ပြသမည်